Taliye Indha Qarshe oo amar duldhigay saraakiisha ciidanka xoogga. – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Taliye Indha Qarshe oo amar duldhigay saraakiisha ciidanka xoogga.
Taliye Indha Qarshe oo amar duldhigay saraakiisha ciidanka xoogga.
Beegsonews-Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed Sarreeye gaas Daahir Aadan Cilmi Indha qarshe oo ka hadlay Tiro koobka lagu wado Ciidanka Xoogga ayaa sheegay in ujeedada laga leeyahay ay tahay in la helo tirada saxda ah ee Ciidanka Difaaca, si loogu qorsheeyo Hub, Gaadiid, qalab iyo dhaqaale ku filan.
Hadalka Taliye Indha Qarshe ayaa ku soo aadaya xilli maanta ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ay ka soo baxeen saldhigyo ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan Gobalka Shabeelaha dhexe.
Previous articleRW Kheyre oo sheegay maanta in 10,050 (toban kun) oo askari la ruqseyn doono
Next articleDhakhtar Irbad Ku Ilaabay Bukaan Uu Qalaayay Iyo Arrinta Ka Dhalatay
Wiil la dhashay Orodyanka Sir Mo Farah ayaa laga soo tarxiilay...